Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.10
Ụfọdụ n'ime ihe ọmụma ndị na ụlọ ọrụ ndị na ọchịchị nwere bụ mmetụta ọsọ ọsọ.
Ụlọ ọrụ inshọransị ahụike nwere nkọwa zuru ezu gbasara nlekọta ahụike nke ndị ahịa ha natara. Enwere ike iji ozi a maka nchọpụta dị mkpa banyere ahụike, mana ọ bụrụ na ọ bịara n'ihu ọha, ọ nwere ike ịkpata mmerụ ahụ (dịka, ihere) ma ọ bụ nsogbu akụ na ụba (dịka, enweghị ọrụ). Otutu isi ihe omuma data di iche iche nwekwara ihe omuma nke choputara , nke bu ihe mere ha ji enweghi ike inweta ihe.
N'ụzọ dị mwute, ọ na-eme ka ọ bụrụ ihe dị njọ iji kpebie ihe ọmụma dị ezigbo njọ (Ohm 2015) , dị ka Nrite Netflix gosipụtara. Dị ka m ga-akọwa na isi nke 5, na 2006 Netflix wepụtara 100 nde fim fim nyere site na ihe fọrọ nke nta ka 500,000 òtù na nwere oku na-akpọ ebe ndị si n'akụkụ nile nke ụwa osụk algọridim nwere ike melite Netflix ike ikwu fim. Tupu ịtọhapụ data ahụ, Netflix wepụrụ ihe ọ bụla doro anya na-akọwapụta ozi, dịka aha. Ma, nanị izu abụọ ka e wepụtara data ahụ Arvind Narayanan na Vitaly Shmatikov (2008) gosipụtara na ọ ga-ekwe omume ịmụta banyere ntinye fim nke ndị mmadụ kpọmkwem site na iji mgba nke m ga-egosi gị na isi 6. Ọ bụ ezie na onye mwakpo nwere ike ịchọpụta ihe nkiri fim nke mmadụ, ọ ka dị ka ọ dịghị ihe ọ bụla na-emetụ n'ahụ ebe a. Ọ bụ ezie na nke ahụ nwere ike ịbụ eziokwu n'ozuzu ya, maka ọbụlagodi ihe dị ka mmadụ 500,000 na dataset, ihe nkiri fim bụ ihe dị nro. N'ezie, na nzaghachi maka ntọhapụ na nyochaghachi nke data ahụ, otu nwanyị nwanyị nwere mmasị nwanyị jikọtara ọnụ na-eme ihe megide Netflix. Lee otú e si gosipụta nsogbu a na ikpe a (Singel 2009) :
Ihe atụ a na-egosi na enwere ike ịnweta ozi nke ụfọdụ ndị na-atụle nke ọma n'ime ihe nwere ike iyi ka ọ bụ nchekwa data. Ọzọkwa, ọ na-egosi na isi nchebe nke ndị na-eme nchọpụta na-eji chebe data siri ike-de-identification-nwere ike ịdaba n'ụzọ dị ịtụnanya. Ebumnuche abụọ a mepụtara n'ụzọ zuru ezu na isi 6.
Ihe ikpeazụ ị ga-eburu n'obi banyere data ndị na-echebara echiche bụ na ichikota ya na-enweghị nkwenye ndị mmadụ na-eweta ajụjụ gbasara iwu, ọ bụrụgodị na enweghi nsogbu ọ bụla. Dịka ile anya na onye na-asa ahụ na-enweghị nkwenye ha nwere ike iche na ọ bụ imebi onye ahụ, na-anakọta ozi gbasara mmetụta-ma cheta otú ọ ga-esi sie ike ịhọrọ ihe dị njọ - na-enweghị nkwenye na-emepụta nchedo onwe onye. M ga-alaghachi ajụjụ banyere nzuzo na isi 6.
N'ikpeazụ, nnukwu isi data, dịka akwụkwọ ndekọ ochichi na nchịkwa azụmahịa, anaghị emekarị ka e jiri ya mee nchọpụta mmadụ. Ihe nnukwu data nke taa, ma eleghị anya echi, na-enwekarị àgwà iri. Ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-eche na ọ dị mma maka nchọpụta-nnukwu, na-aga n'ihu, na-adịghị emetụta-sitere na eziokwu ahụ na ụlọ ọrụ dijitalụ dijitalụ na ndị ọchịchị nwere ike ịnakọta data na ọnụ ọgụgụ nke na-agaghị ekwe omume na mbụ. Na ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-elekarị anya dị njọ maka nchọpụta-enweghị ezu, enweghị mgbagwoju anya, nke na-adịghị akọwapụta ihe, ntụgharị, algorithmically confounded, inaccessible, dirty, na ndị nwere mmetụta-sitere n'eziokwu ahụ bụ na ndị na-eme nchọpụta achọtaghị data ndị a. Ka ọ dị ugbu a, ekwuwo m gbasara ọchịchị na azụmahịa, ma, e nwere ụfọdụ ihe dị iche n'etiti ha abụọ. Na ahụmahụ m, data gọọmenti na-eche na ọ bụ ihe na-abụghị nke na-edeghị aha, obere ihe algorithmically confounded, na obere drifting. N'aka nke ọzọ, ihe ndekọ akụkọ nlekọta azụmahịa na-eme ka ọ dịkwuo mgbe niile. Ịghọta njirimara ndị a zuru ezu 10 bụ ihe enyemaka na-enyere aka n'ịmụta site na isi mmalite data. Ma ugbu a, anyị na-agbanye na nyocha ọchụchọ anyị nwere ike iji na data a.